Nnwale ọrụ - Shenzhen PhiliFast Electron Limited
Ọtụtụ mgbe, mgbe achịkọtara bọọdụ sekit ma mechaa AOI na nyocha ihu, anyị na -akwadokarị onye ahịa ka ọ nye ụzọ nnwale zuru oke iji mee nnwale arụmọrụ ikpeazụ na bọọdụ emechara tupu nkwakọ ngwaahịa na mbupu ụlọ ọrụ anyị.
PHILIFAST nwere ndị otu PCB Functional Test (FCT). Nnwale arụmọrụ na -enyere anyị aka ịchọta ma mezie ọdịda akụrụngwa, ntụpọ mgbakọ ma ọ bụ nsogbu nrụpụta nwere ike tupu ebufe, ma mee nchọpụta nsogbu na ndozi dị mma.
Naanị n'ụzọ dị otu a ka a ga -ekwe nkwa ịdị mma nke ngwaahịa ndị ahịa 100%. Nnwale arụ ọrụ bụ iji zere nsogbu ọgbakọ, gụnyere obere sekit, sekit mepere emepe, ihe na -efu ma ọ bụ akụkụ arụnyere na -ezighi ezi.